१.०८ % ले बढ्यो नेप्से,२ अर्ब ७७ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
कात्तिक ७, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत अर्थात् २७ दशमलव ५१ अंकले बढेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक बढेर २ हजार ५८४ दशमलव ५३ विन्दुमा पुगेको हो । यो दिन कारोबारमा आएका कुल २२५ ओटा धितोपत्रको ५८ लाख १८ हजार २५ कित्ता शेयर रू. २ अर्ब ७७ करोड ३४ लाख २० हजार १३४ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका ती धितोपत्र मध्ये दुई ओटा धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । वेष्ट फाइनान्स र रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा आइतवार १० प्रतिशतले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
यो दिन वेष्ट फाइनान्सको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४४१ दशलमव १० र रिडी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य रू. ६८० दशमलव ९० पुगेको छ । उता मेरो माइक्रोफाइनान्सको शेयरमूल्यमा भने नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत घटेसँगै नकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.१ हजार ५२५ दशमलव ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा सानिमा बैंकको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३ दशमलव ७८ प्रतिशत घटेर रू.४०२ मा झरेको छ ।
त्यसैगरी यो दिन सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भने आइसीएफसी फाइनान्सको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. १५ करोड ९१ लाख ८६ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ७०९ कायम भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहको परिसूचकमध्ये व्यापार समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत घटेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक बढेसँगै समग्र नेप्से बढेको हो । यो दिन सबैभन्दा बढी वित्त समूहको परिसूचक ४ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यसैगरी बैंकिङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत, होटल एण्ड टुरिजमको परिसूचक १ दशमलव ४६ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको १ दशमलव ५९ प्रतिशत, हाइड्रोपावर समूहको २ दशमलव ५२ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको १ दशमलव ७५ प्रतिशत, अन्य समूहको ३ दशमलव २४ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै लघुवित्त समूहको १ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत,जीबन बीमा समूहको शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत,म्युचुअल फण्डको शून्य दशलमव ९१ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक शून्य दशलमव ४१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अनियन्त्रित ब्याजदर वृद्धिमा नियन्त्रण गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव आइतवारको बजारमा परेको देखिन्छ । करीब दुई महीनामा बजार झण्डै ७०० अंक झरिसकेको छ । यो अवधिमा सबल र बलियो वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरुको शेयरमूल्य तल आएको छ ।
यसोत लाभांशको सिजन चलिरहेको छ । त्यसैगरी सूचीकृत कम्पनीहरुले चालू आवको पहिलो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरुको शेयरमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने बजार विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।